के अपराध र चन्द्रमाबीच केहि सम्बन्ध छ त? | Kullabs
के अपराध र चन्द्रमाबीच केहि सम्बन्ध छ त?
चित्र: चन्द्रमाका चरणहरु(स्रोत: Livescience, nih, sciforums)
धेरै समयदेखि कथाकिम्बदन्ती बनेको कुरा हो कि पुर्णिमाको रातमा आपराधिक घटनाहरु धेरै हुन्छन्। के साँच्चै अपराध र पुर्णिमाको रातमा चन्द्रमाबीच केहि सम्बन्ध छ त? के कुनै विशेष चन्द्रमाको चरण वरिपरि आपराधिक घटनामा वृद्धि हुने गर्छ त?
चित्र: चन्द्रमाका चरणहरु
लामो समय प्रहरी वा आपतकालीन सेवाहरूमा काम गर्नेहरूमाझ यस्तो भनाई प्रचलित छ कि पुर्णिमाको चन्द्रमा लागेको रात अरु रातहरुभन्दा व्यस्त र थप खतरनाक हुने गर्छन्। तर विश्लेषकहरु यो धारणा वास्तविकता भन्दा मानिसको मनोविज्ञानमा गडेको हुन सक्छ भन्ने तर्क राख्छन्।
यसमाथि गरिएको अध्ययनमा पुर्णिमाको दिनमा अपराधको घटनाहरु अन्य सबै दिनहरु(औंशी, सप्तमी, आदि) भन्दा धेरै देखिन्छ। औंशीपछिको दिनमा अपराधहरुमा सानो वृद्धि देखिन्छ, तर अन्य दिनहरु संग तुलना गर्दा खासै धेरै होइन। equinox र solstice का दिनमा अपराधको घटना एकदम फरक छैन, त्यसैले शायद सुर्यले अपराधको घटनामा असर गर्दैन भन्ने बुझिन्छ। पुर्णिमाको दिनमा अपराधको वृद्धि हुनुको कारण मानिसमा चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षण शक्तिको असर हुन सक्छ।
हाम्रो शरीर ७०% भन्दा बढी पानीले बनेको हुन्छ, र पुर्णिमाको दिन समुन्द्रको पानिमाथि पर्ने असर जस्तै मानिसको रक्त प्रणालीमा पनि थप असर पर्ने गर्छ। शरीरमा भएका तरल पदार्थ विचलित हुन्छन् र मस्तिष्कमा विशेष दबाबको महसुस हुन्छ।
पुर्णिमाको चन्द्रमाले पूर्ण चरणको समयमा positive ion उत्पादन गर्छ। यसले केहि मान्छेहरुको शरीरको जैविक रसायन र मस्तिष्कको electrical impulses, र रगतमा असर गरेर बिरामी बनाउन सक्छ। दुर्भाग्यवश यस्तो चिरपरिचित लक्षण भएर पनि हामीलाई यसको उपचार बिधि ज्ञात छैन।
चित्र: समुन्द्रमा छालहरु चन्द्रमाको गुरुत्वाकर्षणले आउँछन्।
चन्द्रमाको प्रभावमा विश्वास थुप्रै संस्कृतिमा पुरातन काल देखि चल्दै आएको छ र हाम्रो समाजमा पनि यो सामान्य नै हो। यदि प्रहरी र डाक्टरहरुले पुर्णिमाको रातहरु अधिक व्यस्त हुनेछ भन्ने सोच राखेका छन् भने तिनीहरू अरु दिनहरुमा हुने संकट र बिरामीहरु साधारण भएपनि त्यसलाई चरम भनेर व्याख्या गर्न सक्छन्। हाम्रो आशाहरुले हाम्रो धारणामा प्रभाव परेको हुन्छ, र हामी हाम्रो धारणाको पुष्टि गर्न प्रमाण खोज्छौँ। यो सब हाम्रो मनोविज्ञानमा भर पर्ने कुरा हो। यस्तै कुरा हामीलाई "खराब दिन" मा हुन्छ जुनबेला सबै काम खराब मात्र भएको देखिन्छ, तर केवल वास्तवमा त्यसो भएको हुँदैन।
कथाहरुमा सुन्दा तथ्य जस्तै लागे तापनि चन्द्रमा र अपराधको सम्बन्ध वैज्ञानिक हिसाबले निर्णायक छैन। नियन्त्रित अध्ययनहरुले पनि यो विचार समर्थन गर्ने प्रमाण फेला पार्न सकेका छैनन्। सांख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने पुर्णिमाको रातमा अलि बढी अपराध, दुर्घटना र घाइते हुन्छन्। औंशीमा चन्द्रमा नहुँदा र अरु दिनहरुभन्दा पुर्णिमाको चन्द्रमा धेरै उज्यालो भएर मानिसहरु रातको समयमा थप सक्रिय हुने गर्छन र यसले नै असर परेको हुन सक्ने वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ।
An introduction to rules of derivatives explained with examples28 June, 2022
Benefits of HiringaThesis Writing Services28 June, 2022
Top Ways to Improve Your Chances of Getting into University19 June, 2022
What Kind of Laptop Do You Need for School?10 June, 2022
Best Math Learning Website for Students – AssignMaths.com: Find Homework Help10 June, 2022